Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha iyo Bulshada Xerada Qaxootiga Dhagaxley oo kala qaybgalay shirka Faraca Midnimo
Xubnaha iyo Bulshada Xerada Qaxootiga Dhagaxley oo kala qaybgalay shirka Faraca Midnimo
Maalin nimadii Axada taariikhduna ay ku beegnayd 30/3/14 Waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay lagu qabtay shir aad ubalaadhan oo ay kasoo qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xubnaha kudhaqan xerada iyo marti sharaf kala duwan.
Shirkan oo ahaa shirkii caadiga ahaa ee faraca MIDNIMO ayaa shalay lahaa muhiimad gaar ah waxaana kasoo qayb galay xubno ka socday faracyada kadhisan Ifo iyo Xagardheere. Wuxuu kulankani bilowday abaare 2:00 duhurnimo kulanka iyadoo sidii caadiga ahaydba lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay hogaanka dabagalka iyo arimaha diinta ee faraca Midnimo sh C/majiid. Sheekha ayaa goobta kasoo jeediyay wacdi aad uqiiro badan oo dhalaaliyay bulshadii goobta fadhiday wuxuuna sheekh bulshada xasuusiyay cabsida Allaah iyo wajibaadka saaran adoon kasta oo uu Alle samaystay sidoo kale sheekha ayaa dhalinta ree Ogadenia ku guubaabiyay in fadhiga laga kaco waajibaadka ina saarana aan iska ridno oo uu ulajeedo in lagarab istaago wiilasha dhamacda ku shidaya gumaysiga ku soo duushay diinteena dalkeena iyo dadkeenaba.
Intaas kadib waxaa goobta laga soo jeediyay warbixin waafi ah oo lagaga warbixiyay gudaha Ogadenia iyo dibadaba waxayna dadwaynihii madasha fadhiyay ka haqab beeleen warbixino badan oo ay tabayeen. Intaa kadib waxaa makaroofanka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha faraca IFTIN ee Xagardheere halgame Cabdulaahi oo ugu reenba ka warbixiyay bulshadii ree Ogadenia iyo faracii uu kayimid wuxuuna sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay kasoo qayb galka iyo lakulanka uu lakulmay faraca Midnimo sidoo kale gudoomiyaha ayaa aad dhalintii iyo dadwaynihii goobta fadhiyay ugu booriyay in ay u istaagaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen gumaysiga daashaday.
Dhanka kale waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka ama xoghayaha faraca MUFTAAXULXORIYO ee ka dhisan Ifo wuxuuna aad ugu warbixiyay guud ahaan deegaankii ay ka yimaadeen iyo bulshadii ay hogaanka u ahaayeen waxuuna aad ubogaadiyay maamulka iyo xubnaha faraca Midnimo ee ay martida u yihiin wuxuuna mas’uulku kudheeraaday sidii gacmaha laysu qabsan lahaa sidoo kale waxaa goobta hadal qiiro badan kasoo jeediyay hogaanka arimaha bulshada ee faraca Ifo wuxuuna ka dhawaajiyay muhiimada ay leedahay in ay faracyadu iskala qayb galaan kulamada noocan oo kala ah.
Dhanka kale waxaa maslaxa lagu soo dhaweeyay Abwaan Cabdulaahi Aadan oo goobta katiriyay maanso dhaqaajisay dhamaan dhiiga dadkii goobta fadhiyay, sidoo kale waxaa gabay qiiro badan iyana goobta kasoo jeedisay marwo Ardo oo ay dad badani ilmada qubeen markay gabyaysay sidoo kale waxaa lagalay afkaartii xubnaha waxaana fikirkooda nadiifta ah dhiibtay xubno badan.
Guntii iyo gaba gabadii gulanka ayaa soo afmeermay xili ay goorsheegtu haahaabanaysay 4:30 galabnimo wuxuuna kulanku kudhamaaday guul iyo jawi dagan.